Mahad Salaad oo ka jawaabaya hadalka R / W Rooble - Axadle – Axadle
The AU names the previous Ghanaian president as a particular envoy for Somalia
The wave of pupil kidnappings impacts every thing
The UAE and Ethiopia signal $ 1 billion Settlement on building of street to
DF ayaa sheegtay in talaabooyinka ka imanaya beesha caalamka ay ku qasbayaan…
justice requires immunity for
civil society condemns the regime’s attempts
Waa kuma Ergeyga Gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya? – Axadle
Mahad Salaad oo ka jawaabaya hadalka R / W Rooble – Axadle
By Abdiwahab Ahmed	 On May 2, 2021
Muqdisho (Axadle) – Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan aqalka Soomaaliya ayaa ka dareen celiyey khudbaddii shalay uu jeediyey Ra’iisul Wasaaraha booqashada ku yimid Maxamed Xuseen, ka dib markii lagu wareejiyey doorashada iyo amnigeeda.
Mahad Salaad ayaa diyaariyey khudbada R / wasaaraha wuxuuna soo koobay seddex arimood oo la xiriira doorashada, amniga iyo ciidamada.
Dhalanteedka ku jira khudbadda raiisul wasaare Rooble ee aan walaac ka muujiyay. Waxaan ku soo koobayaa saddex qodob.
Arimaha amniga ayuu sheegay inuu lawareegay amaanka doorashada iyo hirgalinta qorshaha amniga qaranka.
– Amniga doorashada waa hawl farsamo waxayna mas’uul ka tahay ciidanka booliska heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Waa shaqo uu taliye saldhig sameyn karo isagoo kaashanaya kuwa u baahan. Laakiin khilaafku intaas wuu ka weyn yahay, taas oo ah waxa ay taliyayaashu siiyaan, cidda ay amraan iyo siyaasadda ay raacaan. Rooble ayaa laga filayey inuu si buuxda uqaato masuuliyada amniga isla markaana uu badalo taliyayaasha dhiigyacab ee horseeday rabshadihii ka dhacay Caasimadda Muqdisho.
– Meel marinta qorshihii amniga ee Rooble, haddii taasi ay tahay tii uu Farmaajo shalay ka hor sheegay Golaha Shacabka, isma bedelin, waxay ka dhigan tahay in Farmaajo uu weli yahay taliyaha ciidamada qalabka sida, Rooblena yahay fuliyaha qorshayaasha Farmaajo. Waxaan wali aqrinaynaa casharradii uu Farmaajo ka bartay afartii sano ee ugu dambeysay, oo ay ugu dambeysay weerarkii 19-kii Febraayo lagu qaaday madaxweynayaasha, ra’iisul wasaaraha, musharrixiinta, xildhibaannada, siyaasiyiinta iyo dibadbaxayaasha nabadeed. Weerarkii 14-kii iyo 16-kii Abriil lagu qaaday Taliyaha Booliska Gobolka Banaadir Gen Saadaq Joon iyo weerarkii qorsheysnaa ee lagu qaaday guryaheenna 25-kii Abriil oo lagu laayay dad rayid ah laguna barakiciyay kuwa kale, laguna burburiyay ciidammada qalabka sida maanta. Aagag dagaal oo isaga ka dhan ah.
Waa kuma Ergeyga Gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya?…
Ciidanku waxay leeyihiin majiraan mucaarad ama muxaafid waxaanan ka codsanayaa inay dib ugu laabtaan goobihii ay ka yimaadeen isla markaana ay ka fogaadaan faragelinta siyaasada. Wuxuu kaloo sheegay in guddi farsamo loo saari doono ka soo talo bixinta arrimaha siyaasadeed ee saameeya ciidamada.
– Ra’iisul Wasaare Rooble, waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo sida xerooyinka madaafiicda ay u geli karaan xero ayada oo aan la xalin waxyaabaha salka ku haya arrintan, iyadoo aan la sameynin isbedello muhiim ah oo labada dhinacba ay ku kalsoonaan karaan. Sidee ayey waliba isugu aamini karaan taliyayaal kala qeybsan, oo xabad isku ridaya oo aan is ixtiraameynin?
Siyaasad xumo ma ahan in laga baxo ciidanka, laakiin Farmaajo ma yeeli doono, maxaa yeelay wali wuxuu dirayaa ciidamo ka socda gobolada dalka si ay mar kale ugu adeegsadaan siyaasada. Dhanka kale, sidee guddigii aad u sheegtay in aad magacaabi kartaa aaminaad haddii ay tahay guddi hal dhinac ah, mar labaad ma noqon karto gacmaha Farmaajo?
Qodobka ugu dambeeya ayaa ah su’aasha kulanka DF-DG ee uu sheegay Rooble inuu dalban doono. Rooble iyo Farmaajo waxay ka mideysan yihiin diidmada in wax lagu daro heshiiskii Sebtember 17 iyo talobixintii Febraayo 16 iyada oo aan wax shuruud ah lagu xirin. Sida ay labadooduba ku sheegeen khudbadahooda shalay.
– Waxaan rabaa inaan weydiiyo raiisul wasaare Rooble hadii howshu sidaa u fududahay, maxay madaxweynayaasha dowlada federaalka ku meel gaarka ahi u fadhiisteen magaalada muqdisho mudo 45 maalmood ah, shirkiina wuu ku fashilmay oo wuxuu horseeday dagaal ka dhaca magaaladan.
Aragtidaydu kuma salaysna caadifad ee waa mid ku dhisan xaqiiqda. Aniguna waxaan diyaar u ahay inaan qeyb ka noqdo dhammaan xalalka suurtagelinaya in dalkan si nabad ah lagu doorto isla markaana laga badbaadiyo dalka iyo dadka dhibaatadan adag.
Raiisel wasaare Rooble, inaadeerkay Farmaajo, dhoobo cagahaaga ku taagtay yaanay kaa takhalusin, arrintan si xikmad leh u maaree oo dadka talo sii. Kuwa qiirada leh ee raba inay wiiqaan dadaalkaaga, waxaan leenahay, walaalayaal, ilaahay ha idin siiyo iimaan.
Abdiwahab Ahmed 968 posts
Jurgen Klopp calls on the Netherlands to go away Virgil van Dijk outdoors Euro 2020
MUSIIBADA Dhaawacyada Actual Madrid Oo Xadka Ka Gudubtay Kahor Kulanka
Hordhac: Manchester Metropolis vs Chelsea –…
The AU names the previous Ghanaian president as a…
The UAE and Ethiopia signal $ 1 billion Settlement on…
Somalia: SNA mutants depart Mogadishu by settlement…
the Fee on Human Rights warns
The ANC’s Nationwide Govt…
the investigation of a non –…
Prev	Next 1 of 2,923